Izityalo zonyango lwamanzi: iimpawu, unyango kunye nezibonelelo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | | I-ecology
Kuzo zonke izinto ezenziwa ngabantu, kuveliswa amanzi amdaka ekufuneka elungisiwe. IiWWTP zizikhululo izityalo zonyango Amanzi amdaka kwaye anoxanduva lokucoca la manzi. Ngamanzi avela kwimisebenzi yabantu evela kwiidolophu, amashishini, ezolimo, njl. Ukubeka ingozi enokubakho kwindalo esingqongileyo kuba ukuchitheka kunye nokuvuza kunokukhupha izinto eziyityhefu ezibangela iintlekele zendalo.
Ke ngoko, siza kukuxelela yonke into oyifunayo malunga nezityalo zokucoca amanzi.
0.1 Iinkqubo zonyango lwamanzi
1 Unyango kwizityalo zogutyulo
1.0.1 Unyango lokuqala
1.0.2 Unyango lwesibini kwizityalo zonyango
Iinkqubo zonyango lwamanzi
Ukuze amanzi abuyele kwindalo esingqongileyo, kufuneka balandele uthotho lonyango olona njongo iphambili kukususa inkunkuma. Unyango luyahluka ngokuxhomekeka kwiimpawu zamanzi amdaka kunye nendawo ekuyiwa kuyo. Siyazi ukuba amanzi amdaka aqokelelwa kwiityhubhu zabaqokeleli ezenza ukuba zifikelele kwizityalo zokucoca amanzi amdaka. Kulapha apho baphantsi konyango olwahlukileyo ukuze bakwazi ukuzicoca.
Phantse kuwo onke amaxesha onyaka, amanzi adla ngokuhlala umndilili weeyure ezingama-24-48 ngaphambi kokubuyiselwa kwisitishi. Eli jelo linokuba ngumlambo, ichibi okanye ulwandle. Kwizityalo zonyango baphantsi konyango olulandelayo:
Unyango: Iqukethe ukupheliswa kwezona zinto ziqinileyo zikhona emanzini, njengesihlabathi kunye neeoyile. Olu nyango lwangaphambi kwexesha luyimfuneko ukuze ubenakho ukumisa amanzi kwiinkqubo zawo ezilandelayo.
Unyango lwesibini: Isetyenziswa kuphela kwimeko apho ufuna ukuqhubeka ucoceka amanzi ukuwagalelela kwiindawo ezikhuselweyo zendalo. Ngenxa yeendleko eziphezulu abanazo, akuqhelekanga kwenziwa ngesiqhelo.
Siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ukuba zeziphi iinkqubo eziphambili ezenzeka kwizityalo zonyango.
Unyango kwizityalo zogutyulo
Inezinto ezithile zeekhemikhali zomzimba ezisetyenziselwa ukunciphisa umxholo wamasuntswana amisiwe emanzini. Uninzi lwezinto eziqinileyo ezinqunyanyisiweyo ezifumanekayo zinokukwazi ukudilika okanye ukudada. Ezo zidambisayo zihlala zifikelela ezantsi emva kwexesha elifutshane, ngelixa ezokugqibela zingamasuntswana zincinci kangangokuba sele zidityanisiwe emanzini kwaye azinakudada kwintlenga yam. Ukuze kupheliswe la masuntswana amancinci, kufuneka unyango olunzima ngakumbi.
Ezinye iindlela ezisetyenzisiweyo kunyango lokuqala zibandakanya oku kulandelayo:
Intlenge: yinkqubo apho amasuntswana e-sedimentary angawela ezantsi enkosi kwisenzo somxhuzulane. Kule nkqubo, elula nexabiso eliphantsi, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-40 zezinto eziqinileyo ezifumaneka emanzini zinokupheliswa. Ngaphakathi kwindawo yokunyanga kukho iitanki ezibizwa ngokuba zii-decanters kwaye kulapho kwenzeka khona intlenga.
Ukudada: Kuqukethe ukususwa kwamagwebu, amafutha kunye neoyile ukusukela, ngenxa yokuxinana kwabo okuphantsi, bathambekele ekuhlaleni kumaleko angaphezulu emanzini. Kule nkqubo kunokwenzeka ukuba kususwe amasuntswana anoxinano olusezantsi. Ukwenza oku, kufuneka kutofelwe amaqamza omoya ukulungiselela ukunyuka nokususwa kwawo. Ngale flotation, ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-75 zamanqwanqwa aqinileyo anqunyanyisiweyo angasuswa. Le nkqubo yenzeka kwezinye iitanki ezibizwa ngokuba zinyibilikisiwe emoyeni.
Ukungathathi cala: yinkqubo equlathe ukubonakaliswa kwe-pH. Oku kuthetha ukuba amanzi kufuneka ahlengahlengiswe kwi-pH phakathi kwe-6-8.5. Kwimeko yamanzi amdaka ane-asidi, izixhobo zonyango kufuneka zilawule ubungakanani bezinyithi ezinzima ezongezwe kwizinto zealkaline ukuze kuphakanyiswe i-pH yamanzi. Ngokuchasene noko, amanzi amdaka angaphezulu ane-alkaline carbon dioxide yaziswa ukunciphisa i-pH kumaxabiso aqhelekileyo.
Ezinye iinkqubo: ukuba ufuna ukufezekisa ukucocwa kwamanzi amdaka, ezinye iindlela zisetyenziswa njengokusebenzisa iitanki zesahlulo, iidike, izihluzo eziluhlaza okanye ezinye iinkqubo zemichiza ezinje ngokutshintshiselana nge-ion, ukunciphisa, ioksijini, njl.
Unyango lwesibini kwizityalo zonyango
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ngaphandle kokuba kufuneka inqanaba eliphezulu lokuhlanjululwa, olu nyango lwesibini alwenziwa kwizityalo zogutyulo. Ineseti yeenkqubo zebhayiloji ezijolise ekupheliseni phantse yonke into ekhoyo ekhoyo. Ziinkqubo zebhayoloji apho ezinye iibacteria kunye ne-microorganisms zisetyenziselwa ukuguqula izinto eziphilayo kwi-cell biomass, amandla, iigesi kunye namanzi. Uncedo lonyango kwabanye kukuba i-90% iyasebenza.
Kunyango lwesibini lwezonyango zokuhambisa amanzi amdaka ukwahlula ezinye iinkqubo ezahlukeneyo kwi-aerobic kunye ne-anaerobic. Ezokuqala zibukho beoksijini kwaye okokugqibela xa kungekho ioksijini. Makhe sibone ukuba zintoni:
Iinkqubo zeAerobic: Kuyimfuneko ukuba kungeniswe ioksijini kwiitanki apho kungena khona i-stamens emanzini amdaka. Ngeli nqanaba ukonakaliswa kwezinto eziphilayo kuyenzeka kwaye kukhutshwa amanzi kunye nekhabhon diokside. Iimveliso zeNitrogenous ezinjenge ammonia, esisiphumo se nitrogen esinetyhefu eninzi, ziyasuswa kweli nqanaba. Nangona i-nitrate ingasenetyhefu, iyifom enokuthi ifunyanwe zizityalo, kungoko kunokubangela ukwanda kwe-algae kunye nokuvuselelwa kwesondlo. Le nkqubo yokuphucula izondlo yaziwa ngokuba yi-eutrophication.
Iinkqubo zeAnaerobic: Oku kwenziwa ngokungabikho kweoksijini kunye nokuphendula okubilayo kwenzeka apho izinto eziphilayo ziguqulwa zibe ngamandla, icarbon dioxide kunye negesi yemethane.
Siza kuthetha ngezinye zonyango ezenzeka kwizityalo zonyango:
Udaka olusebenzayo: Olu nyango lwenziwa phambi kweoksijini kwaye luquka ukongeza izinto zomzimba eziphilayo kunye nezinto ezincinci ukuze zikwazi ukucoca ioksijini eyenzekayo.
Iibhedi zebacteria: Yinkqubo ye-aerobic kwaye ibandakanya ukubeka inkxaso apho kufumaneka khona ii-microorganisms kunye namanzi ashiyekileyo. Zimbalwa iimali ezongeziweyo ukugcina iimeko ze-aerobic.
Iifilitha eziluhlaza: Zizityalo ezinkcenkceshelwa ngamanzi amdaka kwaye zinakho ukufunxa iikhompawundi.
Ukucolwa kwe-Anaerobic: Zenziwa kwiitanki ezivaliweyo ngokupheleleyo xa kungekho oksijini. Apha kusetyenziswa iibhaktheriya ezivelisa iasidi kunye nemethane xa zonakalisa izinto eziphilayo.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga nezonyango kunye neempawu zazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » I-ecology » Unyango izityalo
Izityalo zamandla enyukliya eSpain